5 Ways Oo Fiidiyowyo Sharaxa Dhaqdhaqaaqa Kordhiyaa Waxqabadka Suuq-geynta Gudaha | Martech Zone
5 Siyaabood oo Fiidiyeyaal Sharaxaya Animated Kordhiyaan Waxqabadka Suuq-geynta
Axad, Febraayo 7, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Marka aynu nidhaahno video waxay noqotay qayb lama huraan u ah nolol maalmeedkeena, ma kaftamaynno. Waxaan ka daawanaa fiidiyowyada internetka maalin walba kumbuyuutarradeena, taleefannadeenna iyo xitaa Smart TV-yada. Sida laga soo xigtay Youtube, tirada saacadaha dadku ku qaataan daawashada fiidiyowyada ayaa sanadkii ka badan 60% sanadkii!
Degellada ku saleysan qoraalka oo keliya ayaa noqday kuwo duugoobay, annaguna kaligeen ma nihin kuwa dhahaya: Google waa! Mashiinka raadinta # 1 ee adduunka ayaa ahmiyad sare siiya waxyaabaha fiidiyowga laga helo, kaas oo leh 53x fursado badan ka soo muuqashada boggeeda koowaad marka loo eego degellada qoraalka ku saleysan. Sida laga soo xigtay Falanqaynta isbeddellada Cisco, marka la gaaro sanadka 2018 fiidiyowgu wuxuu ka dhigayaa 79% dhammaan taraafikada internetka, halka ay hadda ka tahay 66%. Ganacsiyada waa in loo diyaar garoobaa tan iyo markii kor u kaca fiidiyowga ee internetka ma ahan inuu gaabis ku yimaado waqti dhow.
Iyadoo la raacayo ifafaalehan, fiidiyowyo sharrax leh oo firfircoon waxay noqdeen cowska xeeladaha suuq geyn kasta oo internetka ah. Maalin kasta shirkado badan iyo kuwa badan (magacyada waaweyn iyo kuwa bilowga ahba si isku mid ah) waxay u adeegsanayaan fiidiyow ololahooda suuq-geyn, sababtoo ah waxqabadkooda cajiibka ah ee ku-beddelashada iyo cabbiraadaha la-riixayo, iyo faa'iidooyinka kale ee suuq-geynta.
Waa maxay Fiidiyow Sharaxa?
An Video Sharaxa waa fiidiyow gaaban oo sharxaya fikrad ganacsi iyada oo loo marayo sheeko muuqaal muuqaal leh. Haddii sawirku u dhigmo kun eray, fiidiyowgu wuxuu u dhigmaa malaayiin - bixinta hab madadaalo ah oo u oggolaanaya martida inay si fiican u fahmaan alaabadaada ama adeegyadaada.
Halkan waxaa ah fiidiyow sharraxe dhow ah oo aan ka soo saarnay Xarig Dhiig oo loo yaqaan 'Cord Blood Banking', oo ah mowduuc aad u adag oo si fudud loo adeegsaday fiidiyow sharrax ah:
Waxaa jira dhammaan noocyada fiidiyeyaasha sharraxa ah ee la heli karo - laga bilaabo fiidiyowyada sabuuradda fudud illaa animation-3-D adag. Waa kuwan muuqaalka guud ee noocyada fiidiyowyada sharxaya.
Maxay tahay sababta fiidiyeyaasha sharraxa wax ka beddel ku sameyn kartaa ololaha suuqgeynta soo gala? Aynu raacno tallaabooyinka caadiga ah ee suuq-geynta gudaha si aan u aragno sida ay tahay Video Sharaxa waxay kobcin kartaa dadaalkaaga suuq-geynta adoo adeegsanaya xog dhab ah:
Fiidiyeyaasha Sharaxa Soo Jiidashada Soo-booqdayaasha Websaydhkaaga
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ganacsiyada internetka badankood waa sida loo soo jiito booqdayaasha cusub ee internetka boggooda, si kale haddii loo dhigo, sida loo kala safto bogagga ugu horreeya ee Google. Waan ognahay in fiidiyowyada ama bogagga leh fiidiyowyadu ay leeyihiin fursad aad uga wanaagsan oo lagu qoro bogga ugu horreeya ee natiijooyinka raadinta bogagga qoraalka ku saleysan. Si fudud haddii loo dhigo, way ka fudud yihiin dheefshiidka iyo wadaagga - iyaga oo ka dhigaya waxyaabaha ugu habboon ee lagu hagaajinayo heerkaaga guud.
Fiidiyowyadu waa hub aan qarsoodi ahayn oo loogu talagalay SEO (hagaajinta mashiinka raadinta). Falsafadda Google waxay muddo dheer ahayd inay iyaga ka hesho waxyaabaha ugu waxtar badan uguna xiisaha badan iyaga; waxayna garawsadeen in baarayaashu jecelyihiin fiidyowyo madadaalo iyo waxbari kara. Tani waa sababta Google si caqli-gal ah ugu abaalmariyo boggaga internetka fiidiyowga iyaga oo ku daraya iyaga ka sarreeya. Mashiinka raadinta wuxuu tixgeliyaa fiidiyowga inuu yahay mid ka mid ah qaababka ugu xiisaha badan ee ka kooban qadka tooska ah wuxuuna ujeedkiisu yahay qancinta adeegsadayaasheeda iyadoo badanaa la soo bandhigayo fiidiyowyo marka hore natiijooyinka raadinta. Layaab malahan sababta Google u iibsaday Youtube, shabakada bulshada ee fiidiyooga lagu duubay oo sidoo kale ah # 2 aduunka ee loo isticmaalo mashiinka raadinta.
Faa'iidada kale ee fiidiyeyaasha suuqgeynta sharraxayaashu waa iyaga wadaagid. Fiidiyowgu waa waxyaabaha ugu fudud ee khadka tooska ah looga koro warbaahinta bulshada, iyadoo 12x fursado ka badan oo la wadaagi karo ka badan xiriiriyeyaasha iyo qoraalka la isku daray. Isticmaalayaasha Twitter-ka ayaa wadaaga 700 oo fiidyow daqiiqad kasta, Youtube-ka in ka badan 100 saacadood oo fiidiyoow ah ayaa lagu soo geliyaa isla waqti isku mid ah.
Sida laga soo xigtay Facebook, in ka badan 50% dadka ku soo noqda Facebook maalin kasta Mareykanka ayaa daawada ugu yaraan hal fiidyow maalin kasta iyo 76% dadka ku nool Mareykanka ee isticmaala Facebook waxay yiraahdaan waxay u muuqdaan inay ogaadaan fiidiyowyada ay ka daawadaan Facebook. Adoo haysta fiidiyow sharxaya bartaada, awoodda aad u leedahay inay hesho oo ay kula wadaagaan dhagaystayaal bartilmaameed ah ayaa si ballaaran loo hagaajiyay markii la isticmaalayo fiidiyowyada.
Laakiin sug, waxbadan ayaa jira.
Fiidiyeyaasha Sharaxa waxay u beddelaan booqdayaasha Leads
Hagaag, hada markii aad ku kordhisay booqashadaada fiidiyow sharaxe ah, sidee ugu rogi kartaa booqdayaashaas hogaamiyeyaal? Fiidiyeyaasha sharraxaya ayaa u oggolaanaya astaantaada inay samatabbixin garoonka kaamil ah mar kasta. Waqtiguna waa cunsur muhiim ah. Celceliska dareenka aadanaha ee websaydhka qoraalka ku saleysan wuxuu ku saabsan yahay 8 ilbidhiqsi, ka hooseeya dareenka dareenka kalluunka dahabka ah! Si aad u soo jiito xiisaha booqdayaashaada, waa inaad si deg deg ah oo wax ku ool ah u gaarsiisaa farriintaada. Kaliya maahan soo jiidashada iyaga, sidoo kale waxay ku sii kordhineysaa inay sii joogaan waqti ku filan si ay u fahmaan soo jeedintaada ganacsi.
Fiidiyow sharaxe ah oo la dhigay korka laaban bogga soo degitaankaaga natiijooyinka booqashooyinka sii kordhaya laga bilaabo bilowga 8 ilbiriqsi illaa 2 daqiiqo isku celcelis. Taasi waa kobcin 1500% ee hawlgelinta! Waana waqti ku filan fiidiyowga inuu farriintaada u gudbiyo uguna kaxeeyo dhagaystayaashaada inay tallaabo qaadaan. Adeegsiga wicitaan-wax-ku-ool ah oo ka dhex muuqda fiidiyowgaaga ayaa u kaxeyn kara booqdayaasha inay iska diiwaangeliyaan warside, iska diiwaangeliyaan tijaabo bilaash ah, codsadaan la-talin, ama soo degsadaan eBook. Fiidiyowyaashu waxay u rogaan martida inay noqdaan hoggaan u qalma.
Kuwaas hogaamiyayaashu runti ma iibsanayaan sheygaaga ama adeeggaaga sababtoo ah video sharaxe?
Fiidiyeyaasha Sharaxayaasha Ayaa U Beddelaya Macaamiil
Waxaan horeyba u cadeynay sida fiidiyowyada xayeysiinta ah ee firfircoon ay u soo jiitaan dadka soo booqda oo ay ugu rogaan hogaamiyeyaal, marka hadda waxaan u nimid tirooyinka ka soo baxay ee ugu muhiimsan ganacsiga internetka: iibka.
Fiidiyow faafaahiye waa hanti awood u leh yareynta suurtagalka-lumis-macaamil iyadoo la kordhinayo lana ilaalinayo soo-booqdayaasha isla markaana ay lambarada u horseedayaan si joogto ah dhammaan safarka suuq-geynta. Laakiin sidee u qabataa? Hagaag, awooda soojiidashada ee fiidiyowga sharaxaada ah ayaa ku gaari kara dhagaystayaashaada heerar aad u tiro badan! Waa kuwan tusaalooyin:
Great sheeko sheeko iyo muuqaallo Samee macaamiishaada suurtogalka ah inay xasuusato soo jeedintaada ganacsi: celcelis ahaan dadku waxay dib u xusuustaan ​​10% wixii macluumaad muuqaal ah 3 maalmood ka dib iyo ilaa 70% macluumaadka maqalka (cilmi baarista Jaamacadda Western Ontario). Xaqiiqooyinka ayaa tilmaamaya in 64% soo booqdayaasha iyo 85% dadka wax ka iibsada internetka waxay u badan tahay inay iibsadaan badeecad ama adeeg haddii ay daawan karaan fiidiyoow horay u sharaxaya.
Jilayaasha la jeclaan karo waxay ka dhigi doontaa dhagaystayaashaada inay ku xirmaan astaantaada heer qiiro qoto dheer.
Suuqgeynta emaylka waa istiraatiijiyad kale oo suuqgeyn ah oo lagu xoojin karo meelaynta fiidiyowga: heerka guji-marinka ayaa hela a 100% koror celcelis ahaan iyo xitaa e-mayl si fudud erayga video mawduucooda Kordhiyaan sicirka furan 7 ilaa 13%.
Nus (52%) ka mid ah xirfadlayaasha suuqgeynta adduunka oo dhan xus video sida waxyaabaha ku jira internetka ee leh soo celinta ugu fiican maalgashiga.
Sharaxa Daraasadaha Kiiska Fiidiyowga
Crazy Egg, adeegga ay abuureen Hiten Shah iyo Neil Patel, waxay kordhisay beddelaad dhan 64% waxayna sameysay $ 21,000 oo ah dakhli dheeri ah oo bille ah markay dhigayaan fiidiyow sharrax leh oo dhaqaajiya bogga ay ku soo degayaan. Tani waa fiidiyowgooda:
DropBox waxay soosaartay 10% ka badalida beddelaadkooda fiidiyowga sharraxaya, taasoo ka dhigaysa $ 50 milyan oo dakhli dheeri ah 2012 oo keliya Wanaagsan, huh?
Fiidiyeyaasha Sharaxayaasha Ayaa Macaamiisha U Beddela Dhiirrigeliyayaal
Marka, halkan waxaan joognaa heerkii ugu dambeeyay. Waxaad leedahay macaamiil horey u iibsaday badeecadaada ama adeeggaaga, waana jeclaadeen! Marka, sidee fiidiyoow sharrax ah uga caawin karaa iyaga inay noqdaan dhiirrigeliyeyaashaada?
Haddii macaamiisha ay jecelyihiin badeecadaada ama adeeggaaga (oo maxay u diidayaan, sax?), Waxay u badan tahay inay kula wadaagi doonaan fiidiyowga sharaxaada shabakadaha bulshada sida Facebook, Twitter ama Youtube, iyagoo halkaas ugu fidinaya ehelkooda iyo asxaabtooda (ha don 'xishood ha noqon, oo ka codso inay iyaguna la wadaagaan).
Fiidiyow sharrax ah ayaa ah qaybta ugu badan ee laga wadaagi karo internetka, taasina waa waxa ka dhigaya hantida ugu fiican ee macaamiishaadu ay kugu dhiirrigeliyaan kanaalladooda warbaahinta bulshada. Tusaale ahaan, waa kuwan fiidiyow sharaxe ah oo gaadhay ku dhowaad 45 kun booqashooyinka Youtube kaliya:
Fiidiyeyaasha sharraxaya ayaa ah hanti lagu beddelayo macaamiishaada bulsho, sidoo kale! Waxaan garwaaqsannahay ereyga suuq-geynta afku inuu yahay mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee suuq-geynta internetka - iyo bixinta fiidiyowga macaamiishaada si ay ula wadaagaan wax ku saabsan ganacsigaaga wuxuu awood u siinayaa inay la wadaagaan oo ay si deg deg ah oo fudud kuu taageeraan.
Eeg Xayeysiiskayaga Hesho Quote Custom
In kasta oo maal-gashigu uu aad uga badan yahay maqaal, sawir-gacmeed ama xitaa warqad cad oo adag, fiidiyow sharrax leh ayaa looga faa'iideysan karaa dhexdhexaadiyeyaasha, iyo bogag dhowr ah iyo bogagga degitaanka ee boggaaga. Tani waxay isku dareyneysaa awoodeeda inay wado iyo bedesho booqdayaasha - taasoo keeneysa soo laabasho aan caadi aheyn oo ku saabsan maalgashiga.
Tags: fiidiyeyaasha sharraxamarketing inboundbeddelashada bogga degitaankabeddelaad videofiidiyowga bogagga degitaankayum yum videos
Apr 15, 2015 at 11: 51 AM
Waxaan 100% ku raacsanahay sida ay muhiim u yihiin fiidiyeyaasha sharraxayaasha. Waxaan hada bilaabay shirkad aniga ii gaar ah waxaan rajaynayaa inaanan ku habsaamin ku soo biirida meherada 🙂
Waxaan u soo bandhigayaa macaamiishayda mustaqbalka qoraalkan haddii ay waligey i weydiiyaan maxay fiidiyowyadan muhiim u yihiin. Mahadsanid!
Oktoobar 25, 2015 at 12:32 AM
Qoraal weyn! Waxa kaliya ee ka maqan ayaa ah soo-jeedin ku saabsan qaabka fiidiyowga mid ay tahay inuu tago iyadoo ku xiran badeecada ama adeegga uu isku dayayo inuu dhiirrigeliyo. Tusaale ahaan, sidee qof u go'aansan karaa inuu la socdo animation 2D oo fidsan - sida kan oo kale https://www.youtube.com/watch?v=liGvS4j0lKI ama animation 3D - sida kan oo kale https://www.youtube.com/watch?v=Q6cx_MJ9nsA ? Maxay yihiin shuruudaha ay tahay inay hagaan xulashadeenna?
Oktoobar 25, 2015 at 1:41 PM
Ma hubo in cabirradu ay muhiim u yihiin sida qoraalka oo kale. Animation-ku wuxuu awood kuu siinayaa inaad u sheegto sheeko sida aad jeceshahay in loogu sheego - adigoon haysan waqti iyo kharash si aad u dejiso muuqaallo, jilayaal, iwm. Waxaan ku dari lahaa in animation-ka 3D-ka ah, illaa aan si fiican oo la yaab leh loo qaban mooyee, uu u muuqan karo xirfad-laawe. Nasiib darrose, dadweynaha waxaa loo bartay Pixar iyo 3D animation aad u tayo sare leh… haddii aadan u dhigmin karin tayadaas, waxaa laga yaabaa inaysan guuleysan.
Aug 27, 2017 at 10: 46 AM
Sideen ugu isticmaali karaa tan xaruumaha wicitaanka ee xidhan halkaas oo rajadu ku soo socoto.
Sideed u horumarin kartaa qoraallada saxda ah isla markaana macaamil ama shirkad u qaadan lahaayeen shirkad dhab ka ah animation ka soo horjeedka wax soo saarka nolosha dhabta ah ee jilayaasha